मरेको २७ दिनपछि नीतू हिड्दै घर फर्किएपछि…. « Janata Samachar
मरेको २७ दिनपछि नीतू हिड्दै घर फर्किएपछि….
प्रकाशित मिति :6May, 2018 4:46 pm
एजेन्सी । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ काेही मरिसकेकाे ब्यक्ती फेरी हिँड्दै हिँड्दै घर फर्कियाे भन्दा कुनै फिल्मकाे दृश्यमा जस्तै लाग्ने एउटा समाचार बाहिरिएकाे छ ।
भारतीय सञ्चार माध्यम अाजतकले लेखेकाे समाचार अनुसार नोएडामा एक २५ बर्षिय महिलासँग यस्तै अचम्मको घटना घटेको छ । परिवारले उनलाई मरेको सम्झेर दाहासंस्कार गरिदिएको थियो । तर २७ दिनपछि उनी हिडदै घर आईन । परिवारलाई यो निक्कै ठुलो आश्चर्यको बिषय बनेको थियो । पहिले त उनका अभिभावकलाई विश्वास लागेको थिएन जस्को उनीहरुले दाहसंस्कार गरेका थिए उनै अगाडि आउँदा की यो तिनै नीतू हुन् भनि जस्ले सास लिदै थिईन र जिउँदो थिईन् ।
घटना यस्तो थियो ६ अप्रिल नीतू आफ्नो घर देखी हराईन् । परिवारले प्रहरीमा निवेदन दिए । प्रहरीले नीताको श्रीमान् राम लखनमाथि शंका गर्‍यो । पछि प्रहरीले राम लखनलाई दोषी पाएन । २४ अप्रिलमा नीतूको परिवारलाई एउटा मृत शरीर देखाए जुन नोयडाको सेक्टर ११५ मा भेटेका थिए जस्को शरीर पुरै डढेको थियो । परिवारलाई उक्त शरीर नीतूको जस्तोलागेको थियो । प्रहरीले डिएनए स्याम्पल नजाँची सहजै सो शव दिएको थियो । परिवारले अन्तिम संस्कार गरेको थियो । तै पनि प्रहरीले सत्य पत्ता लगाउन घटनाको अनुसंधान गरिरह्यो ।
पछि प्रहरीले यो पत्ता लगायो की नीतू एटामा बस्ने एक व्यक्ति पुरणसँग बस्दै छ भन्ने । नीतू त्याहाबाट ५ तारिख भागेको पनि पत्ता लाग्यो । नीतू २ मे मा परिवार भएको ठाँउमा पुगिन । अहिले प्रहरी जस्को दाहसंकार भएको थियो उस्को पहिचान गर्न अनुुुसंधानरत छन् ।